Guddoomiyeyaasha Haayadaha Shaqaalaha iyo Qaxoontiga Oo Ku Gacan-saydhay Bedddelka Agaasimeyaasha Maamulka iyo Lacagta
Tuesday January 14, 2020 - 13:07:14 in News by G. Good
Hargeysa(HWN):-Guddoomiyaha Haayadda Shaqaalaha Dawladda Somaliland Md Farxaan Aadan Haybe ayaa bilaabay isku shaandhayn uu ku sameeyo Agaasimeyaasha maamulka iyo maaliyadda ee Wasaaradaha iyo Haayadaha Dawliga ah sannadkii 2019ka, waxaanu qorshuhu u ahaa in aanu agaasime qudhi joogin xaruntiisa 2020ka. Waxa la isku beddelay dhammaan intii bartooda/shaqadaas haysay in ka badan 30 sanno, marka laga reebo laba xafiis, kuwaas oo kala Agaasimeyaasha maamulka iyo maaliyadda ee Haayadda Shaqaalaha Dawladda Somaliland iyo Haayadda Qaxoontiga iyo Bare-kacayaasha Qaranka.
Agaasimeha maamulka iyo maaliyadda ee Haayadda Shaqaalaha Dawladda Somaliland Amaal Cabdiraxmaan Axmed waxa ay xilkaas haysaa illaa labaataneeyo gu’, illaa shan guddoomiye ayaa xilka ka degay intii ay xafiiskan joogtay, sidoo kale la’aanteed far lama qaado. Xilal badan ayay si dadban u haysaa. Isbeddelkaasi waxa uu micne yeelan lahaa haddii laga bilaabo xafiiska haayadda shaqaalaha dawladda Somaliland. Qofku haddii uu kursi ku fadhiyo labaataan sanno iyo dheeraad, saw moodi maayo in uu leeyahay?. Is-fahan dhexmara agaasinka lacagta iyo masuulka u sarreeya xarunta dawliga ah ayaa sababa musuqmaasuq Waana sababta aan hawl-wadeennadaas loo taaban inta badan.
Guddoomiyaha Haayadda Qaxoontiga iyo Bare-kacayaasha Qaranka Cabdikariin Axmed Maxamed (Xinnif) ayaa ka dhaartay in la beddelo agaasimihiisa maamulka iyo maaliyadda oo xilkaas haysay tan iyo intii ay jirtay wasaaraddii dib-u-dejintu. 2012kii ayuu Xinnif si cad u jebiyay xeerka doorashada, wuxuu shaqaalaha ka ahaa Guddida Aydhiska Qaranka SOLNEC.
Waxa ka hadlay Professor Axmed Maxamed Cadaad Guddoomiyaha Guddida Anshaxa ee Guddidii Doorashada, oo yidhi "Madaxweyne, wiilkaasi wuxuu adeegsanayaa shaadhkaagii ee wax ka qabo”. Laakiin waxba lagama qaban, waxa la yidhi "Carruurta ha korsado” sidii ayuu sharci-jebinta u sii watay. Imakana ma shaadhkii Madaxweyne Muuse Biixi ayuu xidhan yahay Guddoomiye Cabdikariin Xinnif?